Antso Ho an’ny Fikambanana Iraisampirenena Mba Hirotsaka An-tsehatra Ao Gambia Noho Ny Fanagadrana Mpanohitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jolay 2016 5:49 GMT
Voampanga tanteraka amin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ny Filoha Gambiana Yahya Jammeh teo amin'ny fitondrana nanomboka tamin'ny taona 1994. Sary azon'ny rehetra ampiasaina avy amin'ny White House izay navoakan'lay mpisera Wikipedia Alifazal.
Tamin'ny 20 Jolay 2016, nosazian’ny Fitsarana Avo Gambiana telo taona an-tranomaizina ny lohandohan'ny mpitarika ny Antoko Demokratika Mitambatra (UDP) (ao amin'ny mpanohitra amin'izao fotoana izao), Ousainou Darboe sy mpanohitra mpikatroka 18 hafa noho ny fandraisana anjara tamin'ny fihetsiketsehana tsy nahazo fahazoan-dalana, ankoatra ny fiampangana hafa. Nosamborina tamin'ny 19 Aprily tao an-drenivohitra, Banjul izy ireo.
Nampangain'ny mpanohitra ny fitsarana, raha nanamarika kosa ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona Amnesty International fa manohy ny fiharatsian'ny zon'olombelona ao Gambia ireo sazy an-tranomaizina ho an'ny mpitarika ny mpanohitra ireo.
Anisan'ireo voaheloka i Fanta Darboe Jawara – efa olom-pirenena Amerikana, raha nitsidika ny firenena ary nandray anjara tamin'ny hetsi-panoherana notarihin'ny dadatoany. Nahasarika ny saina tao Etazonia ny didim-pitsarana, raha naneho ny hatezerany tamin'ny fiampangana ireo mpikambana efatra ao amin'ny kaongresy ao Maryland.
Tamin'ny Aprily 2016, nanatri-maso andianà fihetsiketsehana tsy mbola nisy toy izany ny firenena izay nanomboka tamin'ny fihetsiketsehana milamina mitaky fanitsiana lalàm-pifidianana atao alohan'ny fifidianana amin'ny volana Desambra 2016 ao amin'ny firenena. Notarihan'i Ebrima Solo Sandeng, tanora lohan'ny antoko mpanohitra lehibe indrindra, UDP ny fihetsiketsehana. Maro ireo mpanao politika mpanohitra no nihevitra fa manome tombotsoa ho an'ny filoha am-perinasa Yahya Jammeh ny lalàm-pifidianana misy, ary te-hahita izany hiova izy ireo. Araka ny zava-misy, sarotra ny hihaika azy – takiana amin'ny tsirairay ny fandoavana vola 500.000 Dalasi Gambiana (eo amin'ny 11.280 dolara Amerikana) rehefa misoratana anarana antoko politika na mirotsaka hofidiana filoham-pirenena ao Gambia.
Tamin'ny fiafaran'ny fihetsiketsehana, nihodidina ny mpitandro filaminana ary notanan'izy ireo i Sandeng sy ny mpanohana hafa an'ny UDP. Namoy ny ainy nandritra ny fihazonan'ny polisy azy ireo tao anatin'ny 48 ora nisamborana azy ireo i Sandeng sy ny mpikambana roa hafa ao amin'ny UDP. Nitarika fihetsiketsehana hafa, notarihin'i Darboe izany, izay nitaky ny famotsorana ireo mpanao hetsi-panoherana ambiny.
Tsy nihatsahatra niantso ny governemanta mba hanaja ny zon'olom-pirenena hanao fihetsiketsehana milamina i Etazonia, ny Firenena Mikambana sy ireo fikambanana iraisampirenena hafa. Voatsikera tanteraka noho ny fampijaliana mpanao gazety, sy ny mpikambana ao amin'ny mpanohitra ary ireo mpikambana ao amin'ny fiarahamonina LGBT ny Filoha Jammeh, izay teo amin'ny fitondrana hatramin'ny 1994.
Tamin'ny fampahafantarana 2014 tamin'ny Fanadihadiana Ara-Potoana Manerantany(UPR) tao Gambia, nanamarika ny Amnesty International fa: “Nanomboka ny Fanadihadiana Ara-potoana Manerantany (UPR) tao Gambia tamin'ny taona 2010, niharatsy ny zon'olombelona tao amin'ny firenena. Manohy manakana ny fahalalahana maneho hevitra sy manitsakitsaka ny zon'olombelona hafa amin'ny fomba tsimatimanota ny fanjakana. “
Niditra Facebook sy Twitter ny Gambiana sy ny mpiserasera ao amin'ny firenena mba hanameloka ny fiampangana.
Miantso ny fikambanana iraisampirenena mba hiditra an-tsehatra, nizara sary torohay mampiseho ny fanararaotana ataon'ny fitondran'i Jammeh nandritra ny taona maro ny Media Foundation ao Afrika Andrefana*:
Ity no antony mahatonga ny CEDEAO, ny Vondrona Afrikana ary ny fikambanana iraisam-pirenena tokony handray fepetra amin'ny Filoha Yahya Jammeh.
Niantso ny fikambanana iraisampirenena mba handray fepetra ihany koa i Niamina Nko:
akatony ny masoivoho Gambiana rehetra manerantany.
Naneho ny zava-misy kosa i Oumie Andrews fa natao teo anatrehan'ny mpitsara tsy Gambiana ny fotoam-pitsarana :
Ajanony ny Mpitsara Mersenera (mpikarama an'ady) Nizeriana managadra tsy ara-dalàna ireo Gambiana tsy manan-tsiny
Manana politika fandraisana mpitsara sy mpanapaka Nizeriana ny fitondran'i Jammeh; nampahafantatra ny heviny momba izany fomba fanao izany ny Gambiana any Angletera:
Ao amin'ny Fanjakana Mitambatra, manao fihetsiketsehana ny Gambiana, manao fanangonan-tsonia ao amin'ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana (HC) NiGr mandrisika an'i #Jammeh mba tsy hampiasa mpitsara mpikarama an'ady.
Nitaraina ny mpisera iray mampiasa ny famantarana ‘YesWe Can’ (Eny Vitantsika io):
Fahadisoana ny fanomezan-tsazy an'ny #LAWYERDARBO sy ny mpitantana azy….ary avy eo TSY MISY DIKANY ny zavatra rehetra ataontsika
Toa milaza ny gazety gambiana an-tserasera iray fa vola no nahamay ireo mpitsara nisahana ny fotoam-pitsarana fa tsy zavatra hafa:
Manjary misy dikany ho an'ny mpitsara ny vola, lasa lasibatra voalohany ny rariny.
Tao amin'ny Facebook, mpisera iray mampiasa anarana ‘Che Guevaara’ nitaraina momba ny fihatsaram-belatsihin'ny Vondrona Afrikanina (AU):
Tsy miampanga ny Mpanao didy jadona ny Vondrona Afrikanina raha mampijaly ny mponiny izy saingy hiampanga kosa izy raha ny Mpanao didy jadona no voahongana
Nandanjalanja ny toe-draharaha ihany koa ireo mpaneho hevitra avy amin'ny firenena Afrikanina hafa. Adomati Robert avy ao Ogandà nanamarika fa tsy voahaja ara-drariny ny antoko mpanohitra ao amin'ny firenena Afrikanina amin'ny ankapobeny – fa tsy ao Gambia ihany:
Ogandey aho saingy tsy mahita fahasamihafàna amin'ny krizy ara-politika ao Gambia sy ny firenena Afrikanina hafa mijaly ara-politika izay hita ho fandrahonana ho an'ny fiarovana ny politikan'ny fitondram-panjakana ny antoko mpanohitra. Fomba hiarovana ny tombontsoa fitiavan-tenan'ireo mpitarika matim-bola izany. Raha mandroba ny mahantra ny mpanankarena, antsoina hoe ‘fiarovana’ izany ary raha mitolona kosa ny mahantra dia antsoina hoe ‘fandikandalàna’ izany
Mpaneho hevitra avy ao Zambia, Eugine Mwambila, nilaza fa mitranga ao amin'ny fireneny ihany koa ny fampijaliana mpanao politika mpanohitra :
Tsy te hotoherina ny mpitondra Afrikanina, mahamenatra ny demokrasia Afrikanina antsika, Oganda, Ejipta, Zimbaboe, Angola ary mitranga ao amin'ny fireneko Zambia ny mitovy amin'izany izay rahonana sazy an-tranomaizina ny mpanohitra, ilaina ny Amnesty sy ny fikambanana iraisam-pirenena tsy miankina mba hamonjy ity lehilahy ity,
Na izany aza, nivoaka niaro ny filoha Jammeh i Cheikh Bamba, manondro azy – miaraka amin'ny teny hentitra – tahaka ny “ity mpanao didy jadona ity”:
Ity lazaina fa mpanohitra antsoina hoe UDP ity dia vondrona ahitana ireo olo-malaza tsy faly ary manana fifandraisana amin'ny fitondrana mpanao kolikoly teo aloha sy mpanavakavaka ara-poko hiringiriny.
Ity mpanao didy ity no nahavita tsara noho ny fitondrana mpanao kolikoly 30 taona lasa sy ny rafitra fanjanahantany.
Ny tena vazivazy ratsy dia ny tanara namboamboarina isan'andro mikasika ny toe-draharaha Gambiana.